Notanan’ny polisy ilay mpamily nahavanon-doza: tovolahy iray maty tsy tra-drano nofaohin’ny 4X4 | NewsMada
Notanan’ny polisy ilay mpamily nahavanon-doza: tovolahy iray maty tsy tra-drano nofaohin’ny 4X4
Par Taratra sur 08/08/2019
Fantatra fa efa nandona fiara iray hafa teny Ankadifotsy no nitsoaka nandositra ity fiara 4X4 nahavanon-doza tetsy Ankazomanga, omaly ity. Ankoatra ireo olona efatra naratra mafy, maty tsy tra-drano ny tovolahy iray voafaokany.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Ankazomanga, omaly maraina. Fiara 4×4 iray nizotra ho any Andraharo no niala bisikileta iray teo alohany ka tafavoaka ny arabe ary nifatratra tamin’ny fiara iray nijanona amoron-dalana (P. 306) sy mpandeha an-tongotra miisa telo. Tovolahy iray 25 taona maty tsy tra-drano. Lehilahy lehibe iray 52 taona sy vehivavy iray 20 taona kosa naratra mafy. Naratra ihany koa ilay mpitondra bisikileta teo alohany sy mpitondra moto iray izay nanaraka ilay fiara tao aoriana. Nandriaka eran’ny arabe ny ra. Tampoka rahateo ny fiavian’ny loza satria nandeha mafy mihitsy ilay fiara nitsoaka nihazo iny lalana mihazo an’Andraharo iny. Fantatra, araka ny fampitam-baovao fa efa nandona fiara teny amin’ny faritra Ankadifotsy teny ilay fiara no nenjehina tamin’ny moto ka izao namoa-doza izao. Ahina ho nitsoaka ilay mpamily ka tsy nahafehy ny familiana intsony ka izao nifaoka olona teny Ankazomanga izao. Nentina teny amin’ny hopitaly HJRA avy hatrany ireo naratra ary efa notanana eny amin’ny borigadin’ny polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana kosa ilay mpamily nahavanon-doza. Manentana ny rehetra hatrany ny polisy mba ho malina sy hanaja ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana.
Mpianatra eny amin’ny Oniversite…
Rafenomanana Fidy, monina eny Ankazomanga ity niharam-boina ity. Mpianatra taona faharoa eny amin’ny sampam-piananara fitantanana (Gestion) eny Ankatso izy, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny fikambanan’ny mpianatra ao amin’ny sampam-pianarana fitantanana (Aegm). Vory lanona ny olona teny Ankazomanga sy ny manodidina raha nahita ity loza ity. Andrasana, araka izany, ny tohin’ny fanadihadiana ilay mpamily tompon’antoka tamin’izao loza mahatsiravina izao.